Yini i-ECN | Funda izinzuzo ze-ECN Forex Broker
Kuyini ECN Trading Forex?
ECN, okushoyo I-Network Communication Network, empeleni iyindlela yesikhathi esizayo yeMakethe Yokushintshana Kwangaphandle. ECN ingachazwa kangcono njengebhuloho elixhumanisa abahlanganyeli bemakethe abancane nabahlinzeki bayo be-liquidity ngokusebenzisa i-FOREX ECN Broker.
I-ECN isebenza njengebhuloho phakathi kwababambiqhaza abambalwa emakethe nabahlinzeki babo bezinto ezingamaphepha. Yaziwa nangokuthi ezinye izindlela zokuhweba (i-ATS), ECN empeleni inethiwekhi yekhompyutha enika amandla ukuhweba ngezimali namasheya angaphandle kokushintshaniswa kwendabuko.
Kuyafaneleka ukuqaphela ukuthi konke okwenziwayo kwenziwa ngesandla ngaphambi kweminyaka yama-1970s, ngenani elivinjelwe lokuhweba nge-e elikhona kuma-80s. Ngaleso sikhathi, cishe konke ukuhweba nge-elekthronikhi kwenziwa ngohlelo lokuxhumana oluthuthukile olwakhiwe yiReuters, olubizwa ngeReuters Dealing.
Izinhlelo zanamuhla zokuhweba ze-elekthronikhi zaqala ukwenzeka ekuqaleni kweminyaka yama-90s lapho ziqala ukufanisa abathengi nabathengisi kungekudala ukuze babe ngamanani entengo yemali. Akukona ukuthi lawa ma-Networks Wezokuxhumana Ekhompyutheni abengekho phambilini; eqinisweni bakhona kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1960s kepha ayengasetshenziselwa ukuhweba ngemali kuze kube sekupheleni kweminyaka yama-90s.
Izinto Zokuqala Kuqala - Yazi iBroker Yakho
Imakethe ye-Forex kuthiwa ingenye yezimakethe ezaziwa kakhulu kubahwebi abancane. Lapha, izinzuzo zenziwa kusukela ekushintshashintsheni kwamanani amancane kakhulu kumabili ngazimbili. Futhi ngokungafani nokuthengiswa kwamasheya noma izimpahla, ukuthengiselana okwenziwa kwamanye amazwe akwenzeki ekushintshanisweni okulawulwayo.
Esikhundleni salokho, kuyenzeka phakathi kwabathengi nabathengisi abavela ezingxenyeni ezihlukene zomhlaba, ngemakethe engaphezulu kwe-counter (OTC). Futhi, akusho ngaphandle kokuthi udinga ukusebenzisa umthengisi ukuze ufinyelele kule makethe.
Ngenxa yesimo saso esinqunyiwe, ukukhetha umthengisi ofanele kungasho umehluko phakathi kwempumelelo nokwehluleka emzamweni wakho wokuhweba we-Forex. Ngenkathi kukhona abathengisi abaningi emakethe enikeza imikhiqizo nezinsizakalo ezifanayo, kufanele ukwazi ukubona izinhlobo ezahlukene zabathengi ngaphambi kokuqala ukuhweba nge-Forex.
Ngokuphambili, kunezinhlobo ezimbili zabathengi emakethe yokuhweba ye-Forex: Abakhi Bemakethe nabathengi be-ECN. Njengoba igama libonisa, abaMakethi beMakethe yilolu hlobo lwabathengi ababeka ibhidi futhi babuze amanani asebenzisa ezabo izinhlelo ngaleyo ndlela 'enza imakethe'. Amanani ababeka wona aboniswa kumapulatifomu abo kubatshalizimali abangahle bavule futhi bavule izikhundla zokuhweba.
I-ECN - Uhlobo 'Olumsulwa' lwe-Forex Broker Out There
Ngokungafani nabenzi bemakethe, i- I-Network Communication Network (I-ECN) abathengisi abenzi nzuzo ngomehluko wokusabalalisa, kepha bakhokhisa ikhomishini ezikhundleni esikhundleni salokho. Njengomphumela, ukuwina kwamakhasimende abo kuwukuwina kwabo noma kungenjalo bebengeke bakwazi ukwenza inzuzo.
Abathengi be-ECN ochwepheshe bezezimali abasebenzisa amanethiwekhi abo obuciko be-elekhtronikhi ukuxhumanisa amakhasimende abo nabanye abahlanganyeli bemakethe. Ukuhlanganisa izingcaphuno ezivela kubahlanganyeli abahlukene, Abathengisi be-ECN bayakwazi ukunikela ngamabhidi aqine / babuza ukusakazeka.
Ngaphandle kokusebenzela izikhungo ezinkulu zezezimali nabathengisi bezimakethe, abadayisi be-ECN babuye babhekele amaklayenti ngamunye okuhweba. Ama-ECN anika amandla amaklayenti awo ukuhwebelana ngokuthumela amabhidi nokunikela kuhlelo lwenqubo.
Enye yezinto ezikhangayo ECN wukuthi abathengi nabathengisi bahlala bengaziwa emibikweni yokuqashwa kokuhweba. Ukuthengisa kuma-ECN kufana nokushintshana bukhoma okunikeza amanani amahle kakhulu wokucela / ukubuza kuzo zonke izingcaphuno zemali.
Ngama-ECNs, abathengisi bathola amanani angcono nezimo zokuhweba ezingabizi kakhulu njenge Umthengisi we-ECN iyakwazi ukuvumela izintengo ezivela kubahlinzeki abahlukahlukene bezimali. Futhi, indawo yokuhweba enikezwe umthengisi we-ECN isebenza kahle futhi esobala, ingeza ngokwengeziwe esicelweni sokuthengiswa kwe-e.
I-ECN Adentiage - Kungani Kufanele Uhwebe Nge-ECN Broker
Usebenzisa i Umthengisi we-ECN inezinzuzo eziningana; eqinisweni, inani elikhulu labathengisi libheke phambili kubathengisi be-ECN, futhi ngesizathu esizokwenzeka. Abathengisi be-ECN bahlinzeka ngezinzuzo ezinkulu, ezingabasiza ukuba beze ngaphambi kwabaphambili babo abaholayo. Nazi ezinye izinzuzo ezibalulekile zokusebenzisa i-ECN broker.
Ukungaziwa, Ubumfihlo, kanye Nokugcinwa Kwemfihlo
Imvamisa uyincwadi evulekile uma ubhekene nokuhweba okuvamile kwe-Forex. Noma kunjalo, ubumfihlo kanye nobumfihlo buthatha njengokubaluleka okuphezulu lapho ukhetha ukuhamba ngendlela yomthengisi we-ECN. Izinga eliphakeme lokugcina izimfihlo nokuhlobene ngokuyimfihlo lihlobene neqiniso lokuthi umthengisi uzosebenza njengendidane ezimakethe esikhundleni somenzi wemakethe.
Abahwebi banikezwa ukufinyelela okungaphazanyiswa kwamanani emakethe nge-ejenti ye-ECN ne-akhawunti ezinikezele. Njengoba amanani entengo ehlukahluka ekunikezelweni, ekufunweni, ekuqineni nakweminye imakethe, ngokusebenzisa umthengisi we-ECN ofanele, umuntu angathengisa ngokushibilika kakhulu kokunikezwa kwebhidi / ukunikezwa.
Ukwenza Ukuhweba Okusheshayo
Lesi sici siyinto abathengisi be-Forex ngokuvamile abakwazi ukukhokhela kuyo ukuyekethisa. Abathengisi be-ECN baqinisekisa ukuthi ukusebenza ngokuhweba okusebenzayo kuqinisekile kakhulu ekuhambeni ngakunye. Le ndlela eqondile yokuhweba ayidingi ukuthi ikhasimende lihwebe nomthengisi, kodwa kunalokho lisebenzisa inethiwekhi yalo ukubeka ama-oda. Le ndlela ehlukile ivumela noma ngubani ukuthi ajabulele ukwenziwa okungcono kokuhweba.
Ukufinyelela kumakhasimende kanye nokuthwala
Ama-ejenti e-ECN asebenza kwimodeli evumela noma yiliphi futhi lonke ithuba lokuhweba ngaphakathi echibini lamanzi eliphathekayo elisebenza ezikhungweni zezimali ezisebenzayo, ezilawulwayo nezinamakhono. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi imininingwane ixhunyiwe kanjani isatshalaliswa, ukucacisa kungenye futhi inzuzo esemqoka yomthengisi we-ECN. Bonke abahlinzeki be-ECN bavunyelwe ukufinyelela idatha yemakethe efanayo kanye nokuhweba; Ngakho-ke, ukucaciswa kwamanani entengo yemakethe ayisisekelo kusuka kubahlinzeki abaningi be-liquidity kuqinisekisiwe.
Enye yezinzuzo ezinkulu zomthengisi we-ECN ne-akhawunti yokuhweba exhunyiwe ye-Forex ukuvumelana okungaguquki. Njengoba unikezwe uhlobo lokuhweba kwe-Forex, ikhefu alibalulekile, futhi akwenzeki phakathi kokuhweba. Uma uthatha ithuba lomthengisi we-ECN, ungathengisa kahle phakathi kwemicimbi nezindaba, lapho kungenzeka udale ukugeleza kwangempela komsebenzi. Lokhu kudala futhi ithuba lokuthi noma yimuphi umhwebi ahlomule ekuguqukeni kwentengo ye-Forex.
Yiziphi izinzuzo ze-FXCC-ECN?
Umsebenzi we-ECN wokuhweba awuziwa, lokhu kuvumela abathengisi ukuba bazuze izintengo ezingathathi hlangothi, ukuqinisekisa ukuthi izimo zangempela zemakethe zibonakala ngaso sonke isikhathi. Akukho ukuphikisana nokuqondiswa komthengi okusekelwe noma: amasu okuhweba kwangaphambili, amacebo, noma izikhundla zamakethe zamanje.
Ukususwa ngokushesha kwezokuhweba
Amakhasimende e-FXCC-ECN angakwazi ukuhweba phambili ngokushesha, asebenzise ngokunenzuzo ukuphila, ukusakaza, amanani angcono kakhulu asebenzayo emakethe, ngokuqinisekiswa okusheshayo. Imodeli ye-FXCC-ECN ivimbela ukuphazanyiswa kwabenzi bemali, ngakho-ke zonke izisebenzi ze-FXCC zigcina futhi ziqinisekiswe ngokushesha lapho ziphathwa futhi zigcwaliswa. Ayikho idesksi yokusebenzisana lokungenelela, akukaze kube khona ukucaphuna kabusha.
Umthengi, ukufinyelela kwezimali
Imodeli ye-FXCC ECN inikezela amaklayenti ithuba lokuhweba echibini lomhlaba jikelele lokuthengiswa kwemali yezikhungo zezimali ezilawulwayo, ezifanelekayo nezokuncintisana.
Ukukhiqizwa kwedatha ye-forex yokuthengisa / yemakethe
Ngokusebenzisa i-API ye-FXCC, amaklayenti angakwazi ukuxhuma kalula ama-algorithms awo wokuhweba, abeluleki bezazi, amamodeli kanye nezinhlelo zokulawulwa kwezinhlekelele emakethe okuphila kwedatha bukhoma kanye nenjini efana nentengo. I-FXCC bukhoma, i-neutral, idatha emakethe ephumelelayo ifaka ibhidi lokuncintisana kakhulu futhi icela amanani atholakalayo nganoma isiphi isikhathi emakethe. Ngenxa yalokho inqubo yokuhweba ihlala ithembekile futhi ingaguquguquki uma ibuyele emuva ekuhlolweni kokuhweba, noma ekuhwebeni okubukhoma.
I-FXCC ihluke kumthengisi noma umenzi wemakethe njengoba i-FXCC ingalawuli ukusabalala / isithembiso esasakazwa ngakho-ke asikwazi ukuhlinzeka ngokubheja / ukunikezwa okufanayo ekusakazekeni ngaso sonke isikhathi. I-FXCC inikeza ukusabalala kweqiniso okuguquguqukayo.
Ku-ECN, amaklayenti athola ukufinyelela kwamanani emakethe ngqo. Amanani emakethe aguqukayo ekhombisa ukuhlinzeka, ukufuna, ukungazami nokunye kwezimo zemakethe. Imodeli ye-FXCC-ECN yenza amakhasimende akwazi ukuhweba ngokuthengiswa okunamandla / okunikezwayo, okungahle kube ngaphansi kwepipu eyodwa kuma-majors athile ezimweni ezithile zemakethe.